स्वास्थ्य Archives - Page 157 of 165 - Purbeli News
सवारी साधनामा यात्रा गर्दा तपाईंमध्ये धेरैलाई रिगटा लाग्ने र वान्ता हुने समस्या हुन सक्छ। कतिपय मानिस त झन् वान्ता भएकै कारण बिरामीसमेत हुन्छन्। बस, ट्याक्सी तथा हवाइजहाज चढ्दा अधिकाश मानिस वान्ता गर्छन्। तर कतिपयलाई भने सवारीसाधनको गन्धले नै वान्ता गर्ने पनि हुन्छन्। यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रियहरुले सन्तुलित ढंगबाट आफ्ने कार्य गर्न नसक्दा वान्ता...
यी हुन् आंखाको तेज बढाउने घरेलु १० उपाय
लगातार घण्टौसम्म काम गर्नाले, निद्रा पुरा भएन भने तथा धेरैबेर सम्म मोवाइल कम्प्युटरमा बसिरहनाले आँखा कमजोर हुदै जान्छ । आखा कमजोर भएपछि सानै उमेरमा देखि चस्मा लगाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । तर आयुर्वेदका यस्ता केहि घरेलु उपचार छन्, यी उपाय अपनाएमा आखाको तेज बढ्दै जान्छ र चस्मा लगाउनै पर्दैन । १. बदाम -६ /७ दाना बदाम राति पानीमा भिजाएर राख्नुस । यसला...
काेहि छ यिनलार्इ बचाउने ? प्लास्टिकको झोलामा अाफ्नै अान्द्रा बाेकेर हिडछन् माेरङका मनबहादुर
मोरङ । मिक्लाजुङ १ साम्पाङ टोलका मनबहादुर राईले आफ्नो जीवन बचाइदिन याचना गरेका छन् । तीन वर्षदेखि आन्द्राको अल्सरबाट पीडित ४० वर्षिय राईको वीपी कोइराला मेमोरियल अस्पताल धरानमा शल्यक्रिया गरिएको थियोे । पाँच लाख रूपैयाँ चन्दा संकलनबाट उहाँको शल्यक्रिया गरिएपनि आर्थिक अभावमा पूर्ण शल्यक्रिया भने हुन सकेन । तीन लाख खर्च अभावले उनी प्लास्टिकको झोलामा...
खादैँ नखानुहोस् साथ–साथै यि खानेकुरा
खाना स्वादिलो भयो भने मानिस खानाको स्वादमा हराउँछन् । तर कतिपय अवस्थामा मानिसले खानेकुराको नियम भने भुल्छन् । कहिले काँहि यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा तपाइँको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्न सक्छ । कुनै खानेकुरा अर्को खानेकुरासँग मिसाएर खानु घातक हुन सक्छ । यहाँ मिसाएर खान नहुने १० खाने कुराको चर्चा गरिएको छ । १. दुध र दही दुधसँग दही मिसाएर खानु स्वास्थ...
स्वास्थ्य चौकीलाई रु १५ लाखको जग्गादान
इलाम, १७ चैत । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका–२ साबिक फाकफोक गाविसका एक समाजसेवीले आफ्ना बुबाको सम्झनामा स्वास्थ्य चौकीलाई लाखौँ मूल्य पर्ने जग्गा दान दिनुभएको छ । फाकफोकथुम–२ का खगेन्द्रप्रसाद चौहानले स्व बुबाको सम्झनामा स्वास्थ्य चौकीलाई रु १५ लाख मूल्य पर्ने पाँच रोपनी जग्गा दान दिनुभएको हो । स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टरसहितको भवन निर्माणका ला...
सिरानी मुनि लसुन राखेर सुत्नुहोस,हुनेछन यी अचम्मका फाइदा !
साधारणतया हामिले लसुन दिनहुंजसो खाईरहेका हुन्छौं ।खानाको स्वाद बढाउनका लागि लसुनलाई प्रयोग गरिन्छ । तर यसलाई यदि राती सुत्नेबेलामा सिरानी मुनी राख्दा अपत्यारिला फाइदा हुन्छन् । यसमा पाइने वोलेटाइल ओयलको गन्ध नाकको बाटो हुँदै शरिर भित्र प्रवेश गर्दछ, जसले स्वास्थ्यका लागि विभिन्न फाइदा पुर्याउँछन् । १. लसुनको गन्धले शरिरको रक्तसंचार सुधार्छ । यसल...
भद्रपुर, १६ चैत । हात्तीपाइले रोगविरुद्ध औषधि सेवन कार्यक्रमको झापाका प्रजिअ उत्तरकुमार खत्रीले औषधि सेवन गरी आज यहाँ उद्घाटन गर्नुभयो । यही चैत १७, १८ र १९ गते खुवाइने सो औषधिसँगै जुकाका औषधि पनि खुवाइने छ । सो कार्यक्रम यस वर्ष छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेसँगै झापामा सात लाख ३३ हजार जनालाई खुवाइने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । दुई वर्षमु...
जुम्ला, १६ चैत । दुर्गमका बिरामीलाई लक्ष्य गरेर सञ्चालन भएको स्वास्थ्य शिविरमा पाँच सय ९० बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । पेस नेपालको स्थानीय आयोजना, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको सहआयोजना तथा सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल काठमाडौँको प्राविधिक सहयोगमा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरिएको हो । यही चैत १२–१५ गतेसम्म कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञा...
ताप्लेजुङमा क्षयरोगीको पहिचान गर्न खकार संकलन सिविर सञ्चालन गरिने
ताप्लेजुङ, १४ चैत्र । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय ताप्लेजुङले क्षयरोगीको पहिचान गर्न चार ठाँउमा खकार संकलन शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा चैत्र १८ गते फक्ताङलुङ गाँउपालिका स्थित तापेथोकमा र त्यसपछि बिरामीको चाप तथा जनसंख्या बढि भएका स्थानमा सञ्चालन गर्ने कार्यलयले जनाएको छ । शिविरबाट संकलित खकार जिल्लामा ल्याएर परिक्षण गरिने छ । क्षयरोगिको ...
मस्तिष्क पक्षघात भएकालाई स्याहार केन्द्र वरदान सावित
धनकुटा, १५ चैत । स्याहार केन्द्र सञ्चालन भएपछि मस्तिष्क पक्षघात भएका बालबालिकाको जीवनमा वरदान सावित भएको छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको गोकुण्डेश्वर उच्च माविमा स्याहार केन्द्र स्थापना गरिएपछि बजार क्षेत्रका पक्षघात भएका बालबालिका शरीर तन्दुरुस्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । अभिभावक स्वावलम्बन समूह, धनकुटा र मस्तिष्क पक्षघात स्वावलम्बन समूह नेपाल क...